Semalt: UkuSebenza kweeNjini zoPhando kunye neNtsomi ezungeze kuyo
Amaninzi amashishini athatha isiteyinti se-intanethi ukuphucula amandla abo okuthengisa. I-intanethi inike ithuba elikhulu lokuba iinkampani zilandele nayiphi na abathengi behlabathi lonke. Kwiimeko ezininzi, amashishini afumana isicwangciso se-e-yorhwebo kufuneka axhomekeke kwi ukuthengiswa kwe-digital ukwenzela ukunyusa ukubonakala kweentengiso kubathengi - mongodb visual tools for learning. Ngokomzekelo, kunokwenzeka ukusebenzisa iMicrosoft Media Marketing (SMM) ukufeza iimpawu ezininzi zeendaba zoluntu ekuthatheni abathengi abakulungeleyo kwi-niche ekhangayo. Ukuthengiswa kokuqukethwe kunokuthembisa nokufumana indawo efanelekileyo malunga negunya le-domain kwi-niche ethile. Uninzi lwezixhobo ze-webmaster zisebenzisa i-Search Engine Optimization (SEO).
I-SEO yinkqubo yokuthengisa ye-intanethi equka iinkalo ezahlukeneyo ezenza umntu aqakraze umnxibelelwano kwiwebhusayithi yakho, ingakumbi kwikhasi lekhasi lokukhangela. Kukho iindlokhwe ezininzi ezinokujikeleza uhlobo lomsebenzi we-SEO. Kulo khokelo lwe-SEO, uRoss Barber, i-12 (Semalt Umphathi weMpumelelo weMThengi, uveza ezinye zeendlela ze-SEO zakutsha kunye neengqungquthela ezazisasazeka kuyo.
Iindidi ze-SEO kunye neengongoma ezizungezile
Xa uqhuba i-SEO, abasebenzisi abahlukeneyo basebenzisa iindlela ezahlukeneyo ukwenza iiwebhusayithi zabo zibekwe kwiinjini zokukhangela. Ezinye zeendlela ze-SEO zingabandakanya izinto ezifana neendlela ezihlawulwayo ezinokuthi zingabi zivumelekile. Ezinye zeendlela ze-SEO ziquka:
I-hat yoMnyama i-SEO. Le ndlela iquka ukusetyenziswa kwamacandelo angcolileyo ukwenzela ukuba i-algorithm yenjini yokukhangela ifake indawo ephakamileyo. Ezinye zeetekethi zobugcisa zingabangela ukuba isiza sakho sifike isohlwayo esibi kwikhonsoli ye-Google Search. Amanye amathambo amakhanda amnyama aquka ukugxilwa kwegama elingundoqo, u-SEO ongenanqonqqqqqhela kunye nokuvakasha okuhlawulelwayo kunye nokuhlaziywa. I-hat ye-Black SEO ibeka ingozi kwiwebhusayithi ekufumaneni isohlwayo okanye nokuba ne-index-indexing kwi-injini yosesho.
I-hat ye-Gray ye-Grey. Zizo zobuchule ezingabomnyama namhlophe. Le meko ibhekiselele ukuba ubuchule beetatshi ezimhlophe buya kuba busemthethweni kodwa bubeka ithuba elibalulekileyo lokwenza isohlwayo kwizicwangciso zezinga. I-hat ye-Grey i-SEO inceda abantu abaninzi ukuba bahambe kunye nexesha lokusebenzisa okanye ukusetyenziswa kokuqala.
I-hat ye-White SEO. Isikhwama esimhlophe se-SEO siquka zonke iindlela i-Google kunye nezinye iinjini zokukhangela zifuna iiwebhusayithi ukuba zithobele. Ezinye zeendlela ze-SEO ezimhlophe zibandakanya iindlela eziphambili zophando, ukubuyisela emuva kunye nokunyusa igunya lesizinda. I-Google isoloko ikhupha izibuyekezo kwi-algorithm yazo. Abaphathi bewebhu benza i-hat yangasese SEO banokuyithatha ukusuka kweli nqanaba ukuya phambili.
Ininzi yeengcamango ezungeze i-SEO kunye nendlela ezenzeka ngayo. I-SEO yinkqubo eyinkimbinkimbi enokubandakanya enye okanye ezininzi iindlela. Abaphathi bewebhu bazama iindlela ezahlukeneyo zokufumana osebenza kakuhle.
I-SEO ngumgangatho oqhelekileyo kubo bonke abaphathi bewebhu abanqwenela ukubeka i-website yabo kwibala. Xa i-website ihlala kwindawo ephezulu kwiSiphumo seSiphumo soPhando, unokuzuza ngokufumana inxalenye ebalulekileyo yeso sithuthi kwiinjine zokukhangela. Unokufunda iindlela ezininzi zokufumana ezilungileyo ze-SEO kunye nokwenza i-website yakho ibe phezulu.